Hidden Spy Pen ဗီဒီယိုကင်မရာ - 90 မိနစ်အထိ၊ SDCard 32GB Max (SPY008) အထိသိမ်းဆည်းပါ OMG Solutions
Mode wo: mode ကို 1 သင်လွတ်လပ်စွာဓာတ်ပုံကို ယူ. စံချိန်သည် sd ကဒ်မှမကယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအဘို့အ mode ကို2ပြောင်းရန်နှင့် sd ကဒ်မှကယ်တင်ရန်လွယ်ကူအသံခွင့်ပြုပါတယ်။ , ဒီကဒ်မှာအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုအားလုံး View တစ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုကိုသုံးပါ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာကလောင်ထည့်ပါ။
အဘယ်သူမျှမ Software များ: ဒီသူလျှိုကလောင် PC နဲ့ Mac အတွက်လိုက်ဖက်တဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စွဲတံဆိပ်ခေါင်းများဒီတော့သင့်ရဲ့ဒေတာစည်းရုံးရေးလေပြေဖြစ်ပါသည်, မည်သည့်အသံသွင်းသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေအပေါ်ရည်ညွှန်းအချက်များအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူလျှိုကလောင်ကင်မရာကိုအမြင့်ဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းမှလိုက်နာရန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုဘို့အမြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်: Full HD ကို 1920x1080p ဗွီဒီယို & များအတွက် 2560x 1920p PHOTO သည်။ Full HD ကို 9712 မှန်ဘီလူး, 8 Mega pixels, ဟာ့ဒ်ဝဲကို full HD စံရောက်ရှိ။ ကိုယ့်အပေါ်တဦးတည်းကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်တဦးတည်းကလစ်ချွတ်သင်ချက်ချင်းကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုရပ်တန့် / start မှခွင့်ပြုပါတယ်။
ဘက်ထရီ: ကျွန်ုပ်တို့၏ built-in, 100% အားပြန်သွင်းနိုင်, အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်လီသီယမ်ဘက်ထရီ (DC-5v) outlasts အခြားမည်သည့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဘောပင်ရရှိနိုင်ပါ။ သင်အခန်းကုန်သွားပြီလျှင်ပင်မှတျတမျး။
ဒါကတစ်ဦးလုံးဝထူးခြားသောကလောင်ဖြစ်ပါတယ်။ yeah ကြောင့်ရေးသားခြင်းများအတွက်အသုံးပြုမယ့်မသာပေမယ့်လည်း built-in DVR (Digital Video Recorder) high resolution ကတော့ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ် / ဖမ်းယူဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်, HD ကင်မရာနဲ့အတူ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်မည်သည့်အခွအေနေစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖမ်းယူဒါမှမဟုတ်ပဲတော်တော်လေးလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ဦးပါရမီတည်းဟူသောအအေးဆုံးကင်မရာဘောပင်ဖြစ်ပါတယ်။
သူလျှိုကင်မရာကလောင်စံချိန်တင် HD ကို 1080p HD ကို
အားသွင်း / ဒေတာများကို USB တိုးချဲ့မှု Cable ကို
သင်တပင်မျှမနေလျှင်တောင်မှရိုက်ကူးနိုင်အောင်ကို standby Mode တွင်ကိုယ်တိုင် Operate
ထောက်ပံ့ 60 - 90 မိနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရိုက်ကူးတဲ့ function ၏။
မှတ်ဉာဏ်: အထိမိုက်ခရို SD က / TF မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ထောက်ခံမှုများအတွက်ထွ-slot က 32GB
နေဆဲပုံများ, ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်တစ်ခရီးဆောင်သိုလှောင်မှု flash drive ကိုအဖြစ်များအတွက်သုံးပါ။
အားသွင်း / ဒေတာများကို USB တိုးချဲ့မှု Cable ကိုပါဝင်သည်။
USB မှတ်အမျိုးအစား: USB မှတ်စံနှုန်းဆိပ်ကမ်းကို။
ပံ့ပိုးမှုစနစ်: အလိုအလျှောက်ပံ့ပိုးမှု WINDOWS98 / 98SE / ME / 20000XP / MAC OS ကို / Linux နှင့် operating system ကိုခွဲခြား, မရှိပါ drive ကို install လုပ်, (WINDOWS98 မှလွဲ. ) ကို manually install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
SPY008 - ကလောင်ဗီဒီယိုဖိုင်
776 စုစုပေါင်း Views စာ7Views စာယနေ့တွင်